Banyere Anyị - Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Banyere & Olink Technology Co., Ltd.
Kemgbe 2001, Olink nwere mmasị n'ichepụta eriri waya kọstọm, mgbakọ USB, eriri USB, ihe njikọ ụgbọ ala, oghere, wafer na ọnụ. Ka ọ dịgodị, anyị na-enye OEM, ODM ọrụ na ngwaahịa imewe / APQP ogbo ka ndị ahịa chọrọ.
Usoro anyị nọ n'ime ụlọ na-agụnye ịkpụzi na ntinye ngwaọrụ, waya na eriri extrusion, njikọ na ntinye aka, nkenke nkenke ígwè, nkwekọ waya na mgbakọ USB. Anyị na-enye zuru nso nke akpakanamde njikọ na anya maka niile ụdị kasị mma na-ere ụgbọala.
A na-ejikarị ngwaahịa Olink eme ihe na ngwa eletrọnịkị dị ka sistemụ nchekwa, sistemụ AV, sistemụ mgbasa ozi wdg, yana ụgbọ ala eletrik, UTVs, gwongworo ala ahịhịa, akụrụngwa ọgwụ, ngwa egwuregwu, igwe cha cha, igwe ndọrọ ego, igwe, ngwa ụlọ, ndị ahịa elektrọnik na Ikanam ọkụ. Ihe ndi etinyere bu ROSH / Reach / CA65 kwekọrọ na UL / CUL, VDE, nnabata CCC. Akara eriri na eriri dị ka ụkpụrụ SAE / JASO / DIN. Anyị ga-enweta IATF16949 kachasị ọhụrụ na Mee 2018.
Anyị na-ebupụ Europe, Mid-East, America, Australia na ahịa Japan. Ndị ahịa anyị amaara gụnyere 3M, Yamaha, Honeywell, Valeo, VDO na Visteon.
Anyị factory locates na Huizhou City, Guangdong Province, dị nnọọ otu awa na-akwọ ụgbọala Shenzhen. Na mkpokọta mpaghara ogbako square mita 17,000, anyị nwere ndị ọrụ ibe 700.
Na-agba ọsọ na ERP na CRM sistemụ, Anyị na-agbaso ụkpụrụ ọma nke BIREL Onye Mmekọrịta, CLỌ KWURU FORLỌ KWES FORR FOR KWES CR AND NA KWES WITHR WITH KWES CR WITH.
Anyị raara onwe anyị nye ka a zuru ụwa ọnụ ruru eru ODM soplaya nke waya njikota na USB nzukọ, gafere asambodo nke IATF 16949: 2016 àgwà usoro na ISO14001: 2015 gburugburu ebe obibi na usoro, yana ISO13485 ọgwụ na ahụ ike usoro akwụkwọ.
Ngwaahịa anyị kwekọrọ na ụkpụrụ RoHS, REACH na ụkpụrụ nchekwa gburugburu ebe obibi na-abụghị phthalate, akụrụngwa niile akwadoro UL.
Nkwado QC / Nka na ụzụ
Ndị ọrụ ngalaba ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ 5 na mmepụta nke njigide waya. QC nwere ngụkọta nke ndị ọrụ 18. Mgbe nhọrọ siri ike gasịrị, nyocha njiri waya nwere ihe karịrị afọ 8 nke ahụmịhe. Ngalaba injinia anyị enwetala ọtụtụ asambodo teknụzụ na ahụmịhe afọ 15 nke nyocha na mmepe nke ngwaahịa njigide waya.
Anyị na-enye ọrụ 7 24H iji nye ndị ahịa anyị nkwupụta n'ime otu ụbọchị, nye ihe nlele n'ime ụbọchị 3, nwee ike ịnyefe n'ime ụbọchị 7 n'oge na-adịghị anya, ikike imepụta anyị kwa ụbọchị nwere ike ịbụ 500, 000 PC.
Ngwaahịa anyị na-anụ ụtọ ahịa na United States, Europe, Australia, Canada, na Aisa.
Anyị ji obi anyị niile anabata ndị ọbịa gị, Huizhou Olink Technology Co., Ltd. ga-abụ onye gị na ya kwesịrị ntụkwasị obi!